Zimbabwe's president Emmerson Mnangagwa has at times admitted to corruption among his cabinet ministers, but says he lacks the evidence to prosecute, says the writer. Picture: Itumeleng English/African News Agency (ANA)
By Letter to the Editor Apr 12, 2021
By Kudzai Chirokwe
It is tearful that the police, local councils, vehicle inspection department that issues driving licences and the Education Department were among the most corrupt institutions.
The resulting institutionalisation and systematisation of corruption in Zimbabwean political and economic spheres has been extensive.
Critics and the opposition accuse President Emmerson Mnangagwa of failing to tackle high-level graft and say endemic corruption is one reason foreign companies are hesitant to invest in the country.
Mnangagwa has at times admitted to corruption among his cabinet ministers, but says he lacks the evidence to prosecute. It is true corruption is overwhelming in Zimbabwe but we don’t have people who are prepared to give evidence. Those who are engaging in corruption are those who are supposed to end the corruption in Zimbabwe.
LETTER: Zimbwabweans are suffering due to Zanu-PF
Corruption in Zimbabwe mainly consists of public officials demanding bribes for basic services like installing an electricity meter, or approving a house plan to facilitating investment.
The heartless, clueless, careless and corrupt Mnangagwa and his Zanu-PF government failed to end major causes of corruption such as greed, higher levels of market and political monopolisation, low levels of democracy, weak civil participation and low political transparency, high levels of bureaucracy and inefficient administrative structures, low press freedom and low economic freedom.